Njem Nleta Cayman Islands: Ime ụlọ dị puku asaa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Njem Nleta Cayman Islands: Ime ụlọ dị puku asaa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Cayman Islands • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Resorts • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
The Cayman Islands Ulo oru ndi njem nlere nwetara na nso nso a na ulo obibi site na nnukwu uto nke ulo 7,000 nwere ikike ma diri ndi nleta. Nke a gụnyere ihe karịrị ụlọ ọhụrụ 1,000 agbakwunyere n'ime afọ atọ gara aga naanị, yana ngalaba ndị ụlọ na obodo na-aza 73% nke mmụba a.
Ugbu a, ọ na-eguzo na ọnụ ụlọ 7,027 dị n'ofe mba agwaetiti atọ ahụ-Grand Cayman nwere ọnụ ụlọ 6,646, na-esote 220 na Cayman Brac na 161 na Little Cayman – ndị condos na villas category na-anọchite ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụdị ebe obibi dị ugbu a na ụlọ 4,310 na 2,717 ime ụlọ na otu ụlọ oriri na nkwari akụ.
"Anyị ahụwo mmasị na-aga n'ihu site n'aka ndị obodo ịnabata ohere ịzụ ahịa na njem nlegharị anya site na mbibi ụlọ, nke na-akpata 32.2% nke ọnụ ụlọ niile dị ugbu a," kwuru osote onye isi ala na Mịnịsta maka njem nleta, bụ Honorable Moses Kirkconnell. “Site na ntinye aka nke Mịnịstrị na Ngalaba nke Njem Nleta na ịkwado ọzụzụ na nkuzi mmụta kwa afọ nke ndị mmekọ mba ụwa dịka Airbnb na-ezukọ yana iso ndị nwere ike ị mepe emepe iji nye azịza azụmahịa, anyị nwere nnukwu mpako ugbu a inye ọnụ ọgụgụ kachasị ukwuu na ọtụtụ ụlọ dị iche iche. nọmba ahịa dịịrị ndị ọbịa anyị. ” Na ngụkọta, site na 31 Ọktọba 2019, enwere ihe ikikere 799 nyere ikikere na-anọchite anya akwa 9,958.
Atụmatụ atụmatụ ụgbọelu na-aga n'ihu nke Minista na Ngalaba ga-aga n'ihu na-enye ndị njem ohere ka ukwuu ị nweta ebe ha ga-aga site na isi ụlọ ọrụ ọhụrụ dị na North America na karịa ụgbọ elu ha chọrọ. Nọgide na-enwe ohere ikuku na-arị elu bụ ihe kachasị mkpa iji hụ na mpaghara ụlọ ga-anọgide na-erite uru site na njem nleta, ogidi dị mkpa nke akụ na ụba.
N’ilepụ anya n’ihu, Onye Minista Na-ahụ Maka Njem Nleta kwuru, sị: “Ka agwaetiti Cayman na-akwadebe maka ihe a na-atụ anya ịbụ oge oyi ọzọ na-arụsi ọrụ ike gburugburu ụwa, anyị na-agba ndị anyị na ha na-eme njem njem ume - ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọhụrụ ma ọ bụ nke dịte aka - ka ọ gaa n’ihu na-enye ima mba ụwa ama ama site na nnabata Caymankind na ahụmịhe ọdịnala anyị bara ụba. Mgbalị anyị na-eme taa ga-eme ka ndị enyi Cayman nweta ndụ niile ma kwe ka ndị ọzọ kere òkè n'eziokwu nke "Nrọ na Cayman". Anyị na-ekele ndị mmekọ niile na-eme njem njem ka anyị na-aga n'ihu na-arụkọ ọrụ ọnụ iji bulie ebumnuche anyị. "
Cayman Islands ime ụlọ nkwari akụ ndị ọbịa mba ụwa